‘मदन भण्डारीलाई खतरा छ’ भन्ने सूचना उत्तर कोरियाली राजदूतले दिएका थिए – korea pati
May 16, 2020 Korea patiLeaveaComment on ‘मदन भण्डारीलाई खतरा छ’ भन्ने सूचना उत्तर कोरियाली राजदूतले दिएका थिए
आज जेठ ३ गते । २०५० साल आजकै दिन तत्कालीन समयका लोकप्रिय वामपन्थी नेता मदन भण्डारीको जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएको दिन । चितवनको दासढुङ्गा भन्ने स्थानमा भएको जीप दुर्घटनामा चालक अमर लामा बाँचेका थिए भने मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले ज्यान गुमाएका थिए । जीप दुर्घटना रहस्यमय भएको भन्दै तत्कालीन समयमा पनि छुट्टाछुट्टै ४ वटा छानबिन समितिहरु गठन भए ।
तर पनि मदन भण्डारीको दुर्घटना सामान्य दुर्घटना थियो या योजनाबद्ध हत्या थियो भनेर छुट्याउने आधार भने कसैले पेश गर्न सकेनन् । सरकारी छानबिन समितिले दुर्घटना नै भएको प्रतिवेदन दिँदा तत्कालीन एमालेले त्यसको व्यापक विरोध ग¥यो र आफै छानबिन समिति बनायो । मदन भण्डारीपछि दोस्रो वरियतामा रहेका
माधवकुमार नेपालले केपी ओलीलाई एक सदस्यीय छानबिन समितिको संयोजक तोकेर छानबिनका लागि पठायो । ओलीले छानबिन पनि गरे, तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरेनन् । उक्त दुर्घटनाका एकमात्रै साक्षी जीप चालक अमर लामालाई दोषी ठहर गर्दै जेलसमेत हालियो । उनी जेलबाट छुटेपछि कीर्तिपुरमा गोली हानी उनको हत्या भयो र दासढुङ्गा दुर्घटनाको च्याप्टर करिब–करिब क्लोज नै गरियो ।
यसै सम्बन्धमा मदन भण्डारीको स्मरण र दासढुङ्गा दुर्घटनाको सम्बन्धमा तत्कालीन एमालेका नेता राधाकृष्ण मैनालीसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । उनकै शब्दमा मदन भण्डारीको जीवनशैली, चिन्तन, दासढुङ्गा दुर्घटनाको कारण र कारक आदि विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
दासढुङ्गा दुर्घटना मेरो दिमागमा बारबार आइरहने घटना हो । जब–जब देशमा राजनीतिक सङ्कट, राष्ट्रियताको सङ्कट अथवा शासन सत्तामा जाने साथीहरुको वुद्धि र हुटहुटी देख्दा म मदनजीलाई सम्झने गर्छु । र, मदनजीलाई सम्झने बित्तिकै मलाई दासढुङ्गा पनि सम्झना आउँछ । दासढुङ्गा दुर्घटनाकै वरिपरी दुई चार महिना यता मैले एकदुई स्थानबाट खासगरी कुटनीतिक क्षेत्रबाट मदनजीको सुरक्षाको विषयलाई लिएर चासो राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश र संकेत पाएको थिएँ । मैले यो कुरा मदनजीलाई भनेको पनि हो । काठमाडौँमा एक्लै हिँड्ने वा काठमाडौं बाहिर जाँदा पनि साधारण रुपले हिँड्ने यो परिपाटी छाडौँ भनेर भनेको थिएँ । उहाँ पोखरा जानुभन्दा अगाडि अर्थात् दासढुङ्गाको दुई दिन अगाडि पनि मैले यो कुरा उहाँलाई भनेको थिएँ । दुई चार जना साथीहरु पनि लिएर जानुहोस् । साथीहरु आफ्नै खर्चमा पनि सहभागी हुन्छन् । यसले तपाईंलाई साथी र सुरक्षा दुवै हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ ।
विचारिकरुपले मदनजीले जुन पार्टी बनाउनुभयो, अहिलेका नेताहरु त्यो स्थानमा छँदै छैनन् । उहाँजस्तो राष्ट्रवादी नेता अहिले कहाँ पाउनु ? अहिले त कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने सोच भएका नेताहरुले नेकपा कब्जा गरेका छन्, अनि कसरी उहाँको अभियानले सार्थकता पाउँला ? बाहिरी हिसाबले हेर्दा उहाँको उत्तराधिकारी पार्टी त अहिलेको नेकपा नै हो, तर राजनीतिक हिसाब र चिन्तनको हिसाबले भन्ने हो भने मदनको पार्टीको नेतृत्व अहिलेको नेकपाले गर्दैन । त्यसकारण मदनको नीति र विचार अनुसरण नगरेकै कारण देशले यो दुर्गति भोग्नुपरेको छ र यिनै कुराहरुलाई लिएर म मदनलाई स्मरण गर्छु ।
मदनजीको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि माधवजी पावरमा आउनुभयो । माधवजी कै हाली मुहालीमा उनले केपी ओलीलाई एक सदस्यीय छानबिन समितिको जिम्मा दिनुभयो । एक सदस्यीय किन बनाइयो त्यो पनि स्पष्ट खुलाइएन । मलाई लाग्छ माधवजीकै एकल निर्णयले एक सदस्यीय समिति बनाइयो । २०४६ सालको आन्दोलन सुरु भएपछि पाटनमा तत्कालीन मालेको भूमिगत भेला भएको थियो । त्यतिबेला केही नेताहरुले भारतको सहयोग ल्याएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा गरेका थिए । तर मदनले अहिले भारत वा चीनको सहयोग लिएर गणतन्त्र ल्याउने कुरा गर्नुहुँदैन, त्यो हामी आफैलाई घातक हुन्छ भन्दै त्यसको विपक्षमा बोलेका थिए । त्यसकारण उहाँको राष्ट्रिय सोचको बिरोधी शक्तिहरु उहाँको विरुद्धमा लागे र उनीहरु लागेकै कारणले दासढुङ्गा दुर्घटना घट्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
दासढुङ्गा दुर्घटना नभएर योजनावद्ध गतिविधि नै हो । योजनाबद्ध नै हो भन्ने त अहिलेको विकसित घटनाक्रमले पनि पुष्टी गर्छ । यदि त्यो योजनाबद्ध थिएन भने दुर्घटनापछि जेल बसेर निस्किसकेका अमर लामालाई पछि किन मारियो । उनी मारिनु पर्ने अरु कुनै कारण त थिएन । प्रमाण भने त्यही एकजना अमर लामा थिए, उनलाई पनि मारिसकेपछि त सबै कुरा सकियो नि । त्यसकारण यी तमाम सत्यहरुले मदन भण्डारीको दुर्घटना वास्तवमा दुर्घटना नभएर योजनाबद्ध हत्या थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो । नत्र घटनाको १० वर्षपछि जेलबाट निस्किएका चालकलाई किन मारियो त ? रातोपाटीबाट
१०० रुपैयाँ मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा २०० रुपैयाँ दिन निर्देशन ??